Shiinaha Tungsten Carbide Ulaha Soo Saarka iyo Warshad | N&D Carbide
* Dulqaadka H6
Ulaha adag ee sibidhka ah ee carbide waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa aaladaha carbide adag oo tayo sare leh sida kuwa wax gooya, axwaasha dhamaadka, layliyada ama reamers-ka. Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa jarista, shaabbaynta iyo qalabka wax lagu cabbiro. Waxaa loo isticmaalaa warqadda, baakadaha, daabacaadda, iyo warshadaha wax soo saarka biraha aan birta ahayn.
Ulaha Tungsten Carbide (oo sidoo kale loo yaqaan 'Cemented Carbide Rods'), waxaa loo isticmaalaa sameynta qalab tayo sare leh oo lagu goynayo carbide-ka oo loogu talagalay farsameynta aaladaha kuleylka u adkaysta, sida mashiinka dhamaadka, daloolinta, reamer. Iyada oo leh jilayaal adag, xoog sare, kiimiko xasilloon, isugeyn ballaarin hooseysa, koronto iyo kuleyl qabasho, usha tungsten carbide sintered ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa aagga waxsoosaarka warshadaha.
Ulaha adag ee sibidhka ah ee carbide waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa aaladaha carbide adag oo tayo sare leh sida kuwa wax gooya, axwaasha dhamaadka, layliyada ama reamers-ka. Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa jarista, shaabbaynta iyo qalabka wax lagu cabbiro. Waxaa loo isticmaalaa warqadda, baakadaha, daabacaadda, iyo warshadaha wax soo saarka biraha aan birta ahayn. Ulaha carbide waxaa loo isticmaali karaa oo keliya jarista iyo aaladaha qodista laakiin sidoo kale irbadaha la gelinayo, duubab kala duwan ayaa soo xirmay iyo qalab dhismeed. Intaas waxaa sii dheer, waxaa loo isticmaali karaa dhinacyo badan, sida mashiinada, kiimikada, batroolka, metallurgy, elektaroniga iyo warshadaha difaaca.
Ku takhasusay baararka wareega ee tungsten, oo leh xariiq wax soo saar aad u fiican oo qaboojiye ah iyo ul adag oo carbide ah, waxaan kuu soosaaraynaa oo kuu keydinaa ulaha carbide dhulka iyo dhulka. Qalabkayaga goos gooska ah ee h6 ee la safeeyey ayaa ah kuwa ugu caansan.
Hore: Tungsten Carbide Rotary Burrs oo loo habeeyay
Xiga: Suxuunta Tungsten Carbide